के प्रिन्स ह्यारी बर्गर किंगमा काम गर्दैछन् ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
के प्रिन्स ह्यारी बर्गर किंगमा काम गर्दैछन् ?
एजेन्सी । युएस आधारित मल्टीनेशनल चेन बर्गर किंग आफ्नो एक ट्वीटरको कारण चर्चामा आएका छन् । यसको कारण हो, बर्गर किंगले केहि दिनयता बेलायती राजकुमार ह्यारी र मेघन मर्केललाई रोजगारको अफर दिएका छन् ।
उनले बेलायतका राजकुमार दम्पतिलाई कामको अफर गरेसँगै ट्वीटरमा कयौं युजरले आ-आफ्नो राय दिएका छन् । प्रिन्स ह्यारी र मेघर मर्केलले गत हप्ता राज परिवारको वरिस्ठ सदस्यको भूमिकाबाट अलग भएका थिए । उनीहरूले आर्थिक रुपमा आफैं आत्मनिर्भर हुन् चाहेको बताउँदै राजदर्बार छोडेका थिए ।
१४ जनवारीको बर्गर किंगले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा एक ट्वीट गर्दै लेखेका थियो, ” यहाँ शाही परिवारको ‘पार्ट टाइम जब’ दिइने छ । “
2:28 AM – Jan 14, 2020
बर्गर किंगको यस ट्वीट पश्चात सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा कयौं व्यक्तिको रिट्वीट आउन शुरु भएको थियो । बर्गर किंगको यस ट्वीटलाई १,४०० पटक भन्दा ज्यादा रिट्वीट गरिएको छ भने ६,००० भन्दा ज्यादा व्यक्तिले लाइक गरेका छन् ।
बर्गल किंगको उक्त ट्वीटमा टिप्पणी गर्दै एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “यो फुड चेनले इन्टरनेटमा हामीहरूको हृदय जित्यो ।”
2:56 AM – Jan 14, 2020
See Mo Sabi’s other Tweets
2:43 AM – Jan 14, 2020
See Kylo-Ben’s other Tweets
Oakview Films @OakViewFilms
Burger King – the only royal family I respect.
2:30 AM – Jan 14, 2020
See Oakview Films ‘s other Tweets
Burger King Arg
Trabajá con nosotros, elegí el futuro como vos querés: http://bit.ly/2t5PFem
2:39 AM – Jan 10, 2020
महारानी एलिजाबेथले आफ्नो नाति प्रिन्स ह्यारी र उनको पत्नी मेघनको उज्वल भविष्यको कामना गर्दै उनीहरूलाई आशिर्वाद दिएर बिदाइ गरेकी थिइन् । “मेरो परिवार र म, ह्यारी र मेघनको यो योंग फेमलीको रुपमा नया जीवन जिउने इच्छाको समर्थन गर्छौं ।”, उनले भनेकी थिइन् ।